Artivive APK Dhawunirodha yeAndroid [Yazvino 2022]
Dai 7, 2022 January 28, 2022 by Shweta Tripathi
Nhasi takuunzirei chinoshamisa app chine chekuita nehunyanzvi. Inodaidzwa kuti Artivive APK. Uku ndiko kufanira-kuve neshandiso kana iwe uri mumhizha uye uteedzere munda sechido.
Isu tinogara munyika izere nehunyanzvi kutaura. Kuuya kubva kune zvakasikwa kune kwemukati kufungidzira kwevakadzama ekufunga kufunga. Zvese zvinoshandurwa kuita zvisikwa zvinooneka mune akawanda mafomu.
Isu tinotenda kuti iyi inogona kunge iri yekuwedzera inoshamisa kune yako runyorwa rwe Kugadzirisa Zvishandiso pafoni yako. Unogona kudhawunirodha yazvino vhezheni yechishandiso ichi mahara kubva kune yedu saiti.
Chii chinonzi Artivivie APK?
Icho chirongwa chakagadzirwa neArtivive. Iyo tekinoroji kambani ine yakatarisana neyakawedzera pane yakawedzera chokwadi mifananidzo. Iyo kambani yakavapo muna 2017 uye inotungamirwa muVienna, Austria.
Iyo kambani ine chinangwa chekugonesa vatambi vanobva kupote nyika kubatanidza hunyanzvi hwavo nehunyanzvi hwezvidhori zvezera. Inotarisa nezvebasa muNew Media Art kutungamira uye hunyanzvi masangano kuvabatsira kuwedzera mabasa avo.
Iko kushandisa, iyo iri pamutemo nekambani, inonyatsoshanda pane Artivive APK fomu yakawedzerwa yemhizha.
Kuiswa kwechishandiso ichi kwakashandura nzira iyo art inonwiwa munyika yanhasi. Iko kushandiswa kunotarisa pakushandisa yakasarudzika yechokwadi kugadzira hutsva hunyanzvi hwekunyora, nekuwedzera mavhidhiyo emhizha.
Icho chinobva chawedzera nhoroondo yenguva uye kana basa racho riri muchimiro chemifananidzo ino pindirana nechinhu chakavezwa chemhando.
Iwe ungafarire kuishandisa uye tarisa hunyanzvi hwemhizha nenzira iyo yakanga isingagone kwenguva pfupi yapfuura.
zera 95 MB
Package Zita com.artivive
Inodiwa Android 4.3 uye Pamusoro
chikamu Apps - Art & Design
Nzira yekuodha sei iyo Artivive APK?
Kuti uwane iko kushanda pane yako Android mobile uye isa kuti ishandiswe. Iwe uchafanirwa kurodha pasi uye kurimisikidza.
Nekutevera matanho pazasi, ndezvako zvese.
Svetukira kurodha APK bhatani, uye riinze.
Tsvaga iyo faira pane yako smartphone.
Tinya pairi kuisa.
Kana zvakakundikana. Vhura zvigadziriso zvekuchengetedza uye bvumidza "Unknown Devices" ??.
Tarisa pane yefoni skrini uye tsvaga iyo icon yekuishandisa.
Iyo Artivive APK inzvimbo yeiyo yekushandiswa kwehunyanzvi kuti uone zvisikwa zvehunyanzvi nerubatsiro rwechokwadi chakawanikwa. Unogona kudhawunirodha iyi yemahara nekutapa iyo link yakapihwa pazasi pane yako Android set.
IndigoLearn Apk Yemahara Dhawunirodha Ye Android [Itsva 2022]
FaceCast Apk Yemahara Dhawunirodha Ye Android [Gadziridza 2022]